Xaliimo Yarey “Dowladda awood uma laha inay caddeyso xilliga doorashada dhacayso..” - Latest News Updates
Xaliimo Yarey “Dowladda awood uma laha inay caddeyso xilliga doorashada dhacayso..”
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya,Xaliimo Ismaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) ayaa sheegtay in xukuumadda federaalka iyo dowlad-gobolleedyada aysan awood u lahayn inay caddeyaan xilliga doorashada iyo sida ay u dhacayso.
Waxay xaqiijisay cidda kaliya ee awood u leh arrimaha doorashada inad tahay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan, xilli ay ka hor hadleysay xildhibaannada golaha aqalka sare.
“Xukuumad, ama Baarlamaan.. xukuumad federaal ah ama mid dowlad-gobolleed ha noqoto wax shaqo ah oo ay ku leeyihiin maleh, sharciga ay u heystaana maleh inay caddeeyaan doorashada gorta ay dhacayso iyo sey u dhacayso … sida ay u dhacayso nidaamkeeda sharciga doorashada soo caddeyn, Baarlamaankana soo ansixin .” Xaliimo Yarey ayaa sida sheegtay.
Xaliimo Yareey waxay sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan xornimo la xiriirta inay iyagu wax soo doortaan, taasna si loo gaaro waxay usoo jeedisay golaha aqalka sare oo Axaddii ay hortagtey inay ka shaqeeyaan sidii ay u gaari lahaayeen cidda ay rabaan inay soo doortaan.
Dhanka kale weli kalama cadda noocao doorasho ee dalka ka dhacaysa,iyadoo dadka ka faalooda siyaasadda Soomaaliyana ay sheegayaan inaysan sahal noqon karin doorasho shacab xilligan inay ka dhacdo dalka.
Previous articleKENYA: Coast Guard seizes two Chinese vessels